shirkada macdan Seeraar First ku qoran Tel Aviv stock exchange - Blockchain News
shirkada macdan Seeraar First ku qoran Tel Aviv stock exchange
Shirkadda macdan cryptocurrency Canadian Bitfarms ayaa dhameystirtay ay ku biirto guutada Tel Aviv-ku qoran jeestay shirkada macdan crypto Blockchain Macdanta Ltd., ku dhawaaqay in xereynta ah in Sunday Tel Aviv Stock Exchange ah.
biirto wuxuu abuuraa shirkaddii ugu horreysay ee la cryptocurrency sida ganacsi asaasiga ah ay tahay in la qoran is-dhaafsiga.
Labada shirkadood ee ugu horeysay ku dhawaaqday inay heshiis-iyo midowgii qorshaha inay taxaan on Stock Exchange Tel Aviv ee sida shirkad-in crypto-diiradda a December 2017, laakiin xeel dheer ka jaangooyaha Israel wajahay. In March, Shirkadaha ku dhawaaqday in Maamulka Israel Securities dhammeeyey ay baaritaan midowgii.
Bitfarms shaqeeya afar xarumaha gobolka Kubeek iyo waxaa hadda la dhisayo xarun Kombuyuutarada shanaad.
Kaliya afar bedasha Crypto adeeca shuruudaha jaangooyaha ee South Korean
Dabayaaqadii January, waxaa ...
Revolut jebiyo xitaa markii 1-dii ka ku daray ganacsiga crypto in madal
Revolut, dhaqaale ah ...
heshiisyada Smart hadda la aqoonsan yahay sida waafaqsan sharciga Tennessee
Post Previous:Coinsource waxaa ciidamo ATM Seeraar
Post Next:Mastercard blockchain isticmaalaa si ay ula dagaalamaan IDs been abuur ah
Investors la kulmay SEC si ay ugala hadlaan dhaafitaan crypto
Seeraar iibsan amar ka sii badan yihiin 90% suuqa markii ugu horeysay tan iyo bishii March 2017
Seeraar ATM network Coinsource la Acuant-factor multi authenticator u shaqeeyo
250 shirkadaha ku biiro madal blockchain bangiga ICICI ee
weydaarsiga crypto Korean bilaabaan is dadaal sharciyeynta
patent Amazon files crypto la xidhiidha durdurrada xogta